नेपाल आइडलमा बिबादित बनेका गायक रामकृष्ण ढकाल के भनछन् त बिजेता बुद्ध लामालाई ? (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
नेपाल आइडलमा बिबादित बनेका गायक रामकृष्ण ढकाल के भनछन् त बिजेता बुद्ध लामालाई ? (भिडियो सहित)
September 23, 2017	287 Views
आज बिजेताको घोसित दोहा कतारमा गरिएको छ । नेपाल आइडलका ३ जना प्रतिस्प्रधी मध्ये प्रताप दास तेस्रो स्थानमा आउन सफल भएका छन् भने निशान भट्टराई दोस्रो र नेपालको पहिलो नेपाल आइडल बुद्ध लामा बन्न सफल भएका छन् ।बुद्ध लामा निशान भट्टराई भन्दा १ करोड बढी भोटले बिजेता भएका छन् । बुद्धले जितेसंगई उनलाई धेरै समर्थक तथा नेपालका चर्चित गायकहरु बाट बढेको ओहिरो आइरहेको छ। नेपाल आइडलमा बिबादित बनेका गायक राम्क्रिशन ढकालले पनि बुद्ध लामालाई बधाई ज्ञापन गरेका छन् ।के भन्दै बधाई दिए त गायक रामकृष्ण ढकालले बुद्धलाइ ? तल भिडियोमा हामीले प्रस्तुत गरिएको छ ।